Ngabe udinga ukusebenzisa i-PMS? Cela iDemo yamahhala Manje
Cela iDemo yamahhala
Ngabe usenemibuzo mayelana noZeevou? Silapha ukuzobaphendula. Zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi ngeNgxoxo Ebukhoma ekhoneni elingezansi kwesokudla sanoma iliphi ikhasi, noma ugcwalise ifomu ukuze ukhethe isikhathi seDemo yamahhala engu-1: 1.
Sizokwabelana ngesikrini sethu ocingweni futhi sikubonise ngokuningiliziwe zonke izindlela iZeevou engakusiza ngazo ukuthi usebenze kahle futhi uthuthukise ibhizinisi lakho lokungenisa izihambi.
Ngingathanda ukuthola imininingwane emnandi yokukhangisa nokunikezwa okuvela kuZeevou.
Hlela idemo yamahhala